UMesiya Uyafika | Isigidimi SeBhayibhile
UYehova ubonisa ukuba uYesu waseNazarete unguMesiya owathenjiswayo
NGABA uYehova wayeza kubanceda abantu bakwazi ukumbona uMesiya othenjisiweyo? Wenjenjalo. Cinga nje ngoko wakwenzayo. Kwakusekudlule phantse iinkulungwane ezine emva kokuba iZibhalo zesiHebhere zigqityiwe ukubhalwa. Kwisixeko saseNazarete, kumantla eGalili, ibhinqa eliselula uMariya latyelelwa ngumntu elingazange limlindele. Kwafika kulo ingelosi uGabriyeli yalixelela ukuba uThixo wayeza kusebenzisa amandla akhe, umoya oyingcwele ukuze lizale unyana nangona lalingazani nandoda. Lo nyana wayeza kuba nguKumkani othenjisiweyo, nowayeza kulawula ngonaphakade. Lo mntwana nguNyana kaThixo owayephila ezulwini, ekwakuza kufuduselwa ubomi bakhe kwisibeleko sikaMariya.
Ngokuthobeka, uMariya wasamkela eso sabelo sikhethekileyo. Umchweli ogama linguYosefu awayeza kutshata naye, wamtshata emva kokuba uThixo ethumele ingelosi ukuze imqinisekise ukuba nguThixo owayebangele ukukhulelwa kukaMariya. Kuthekani ke ngesiprofeto esithi uMesiya wayeza kuzalelwa eBhetelehem? (Mika 5:2) Loo dolophana yayikumgama oziikhilomitha ezili-140 ukusuka eNazarete.
Umlawuli waseRoma wakhupha umyalelo wokuba kubalwe abantu. Lo myalelo wawusithi abantu bamele baye kubhalisa kwiidolophu abazalelwa kuzo. Kuyabonakala ukuba uYosefu noMariya babezalelwe eBhetelehem, ngoko uYosefu wathabatha umfazi wakhe okhulelweyo baya apho. (Luka 2:3) UMariya wabelekela esitalini, waza olo sana walulalisa emkhumbini. Emva koko uThixo wathumela iingelosi ezininzi ukuze zixelele iqela labelusi elalisalusa ecaleni kweenduli ukuba usana olusandul’ ukuzalwa nguMesiya othenjisiweyo, okanye uKristu.
Kamva nabanye bangqina ukuba uYesu nguMesiya othenjisiweyo. Umprofeti uIsaya wayethe kwakuza kubakho umntu oza kulungisa indlela yomsebenzi obalulekileyo kaMesiya. (Isaya 40:3) Loo mntu yaba nguYohane uMbhaptizi. Xa wabona uYesu wathi: “Yabonani, iMvana kaThixo esusa isono sehlabathi!” Bengaphozisanga maseko, abanye abafundi bakaYohane balandela uYesu. Omnye wabo wathi: “Simfumene uMesiya.”—Yohane 1:29, 36, 41.
Kwabakho nobunye ubungqina obungakumbi. Xa uYohane wabhaptiza uYesu, uYehova wathetha esemazulwini. Ngomoya wakhe oyingcwele, wamisela uYesu njengoMesiya waza wathi: “Lo nguNyana wam, oyintanda, endikholisiweyo nguye.” (Mateyu 3:16, 17) UMesiya ekudala ethenjisiwe wada wafika!
Kwenzeka nini oku? Ngowama-29 C.E., kanye ekupheleni kweminyaka engama-483 eyayixelwe nguDaniyeli. Obu bobunye kubungqina obuninzi bokuba uYesu unguMesiya, okanye uKristu. Noko ke, sisiphi isigidimi awayeza kusishumayela emhlabeni?
—Oku kusekelwe kuMateyu isahluko 1 ukusa kwesesi-3; kuMarko isahluko 1; kuLuka isahluko 2; kuYohane isahluko 1.
UYehova wazisebenzisa njani iingelosi ukubonisa ukuba uYesu unguMesiya?
UThixo wamsebenzisa njani uYohane uMbhaptizi ukuze abonise ukuba uYesu unguMesiya?
UYehova wabonisa njani ukuba uNyana wakhe unguMesiya?
UNGUNYANA KATHIXO NGAYIPHI INDLELA?
UYehova nguTata kaYesu—kodwa kungekhona ngendlela efanayo neyabantu yokudibana kwendoda nomfazi—yena wadalwa nguThixo. Waba ngumntu wokuqala ukudalwa nguYehova. (Kolose 1:15-17) Ekubeni inguYehova owadala uYesu, emnika ubomi, kunokuthiwa nguTata kaYesu. Emva kokudala lo Nyana wakhe ungumoya, uYehova wamsebenzisa “njengomsebénzi onobuchule” ukudala zonke ezinye izinto ezikhoyo, kuquka ummandla wendalo.—IMizekeliso 8:30.
UYosefu wayikhusela njani intsapho yakhe? Kwakhutheni ukuze ase uMariya noYesu eYiputa?
Ungena njani uMesiya kwinto uThixo awayithembisa uAbraham? Funda indlela uThixo aza kulukhulula ngayo uluntu kwizigulo iintlungu nokufa.